Indlela Hlela evakashele eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Indlela Hlela evakashele eYurophu
Uma uhlela uhambo oluya eYurophu, ubhekene nezindlela eziningi kangaka! izindawo Endless kanye nakho, ukuthi ungahamba iminyaka bese uzizwa sengathi uphuthelwe okuthile okubalulekile. Lokhu kungaholela ekwenzeni ifayili le- amaphutha wokuhamba wokuzibophezela ngokweqile, futhi uphuthelwa imininingwane ezincane ezenza travel futhi isitimela sokuvakasha imilingo ngakho. Silapha ukuze bakutshele ukuthi yini akufanele akwenze futhi Indlela ukuhlela evakashele eYurophu, kusukela ekuqaleni kuze kube uqede!
Ithiphu 1: Nciphisa Ukuyibeka Phansi
Ngaphambi ungathola Tapas eyiqiniso Spanish, piazzas eRoma, noma amasimu ophahla ePrague, i kancane ebalulekile yokuphatha liyadingeka! Ngamafuphi nje, walungisa ngaphezulu wena lapho ohlela evakashele eYurophu, enkulu amathuba akho mnandi futhi uhambo ukucindezeleka khulula ophila kuze kube okulindele.
Ngakho-ke nansi ithiphu ethi Gcina Isitimela: ukhethe phezulu emihlanu, kumele okufanele leyo adventure European! Mhlawumbe okuphuza Hofbrauhaus e Munich, noma ngokuthatha uhambo canal e Amsterdam, noma behlola uDavide-engeli amaningi – e Florence. Noma ngabe siyini, uphawu lezo phansi ukuhlela uhambo lwakho lokuzungeza kubo. Akukhetha ngezitimela.
Prague kuya eBerglin Amathikithi wesitimela
I-Frankfurt kuya amathikithi wesitimela iMunich
Ithiphu 2: Musa ugweme clichés.
Manje njengoba sesikhulumile ngo Uqinisekisa ukuthi udinga ukuhlela evakashele eYurophu, olandelayo ngokukhetha izabelo zakho phezulu. Ngo umoya yolo, ungase ufune ukuya ngaphandle ithrekhi ezibhudulekile ukucinga amagugu afihliwe kwakuyilezo eziphakathi kwemizi. Kodwa Isitolo e kini othi efuna ukuya ngokumelene izindawo kuqhakanjiswe, ungase uthande ukuthatha isihlalo. Ebhasini izivakashi. Kukhona isizathu esenza ezindaweni ezifana waseColosseum, Eiffel Tower, futhi Charles Bridge bonke ethandwa kakhulu ezivakashini: bemangalisa! Ungazizwa kufanele uthole endleleni eshayiwe ngenxa yakho nje. Uma enkulu ezikhangayo ozithanda, bese uya futhi uzibone.
Ngokufanayo, musa aphathe incwadi njengoba ivangeli. Kungase usho Louvre kuyinto ngokuphelele kumele-do on a uhambo Paris, kepha mhlawumbe ungaba nosuku olungcono lokulufuna Blek le igundane izingcezu ezindongeni zomgwaqo. Ukuvumelana nezimo, lapho usohambweni, kuyisihluthulelo, njalo!
London Frankfurt Izitimela
Amathikithi eLondon ukuya eCologne Isitimela
Amathikithi eLondon aya eBrussels Isitimela
Ithiphu 3: Izinsuku zokuhamba zibalulekile lapho uhlela uhambo oluya eYurophu
Izikhangibavakashi e zonyaka off. izinyanga Popular kukhona Julayi, Agasti, futhi Septhemba. Ziyakwazi ngobuhlanya umatasa, ingasaphathwa ezibizayo! Uma uhlela uhambo oluya eYurophu, ngo-Summer, uzobe wabelana wonke nakho olulodwa nezigidi nezigidi abangane bakho abaseduze. Indawo uzobe ibibhukelwe ukuphuma, noma eqolo futhi Izitimela uzagcwala okuningi, bebona ukuthi kukhona indlela engcono kakhulu ukuhamba!
Ithiphu 4: Hlanganisa imibhalo yakho yezokuvakasha njengengxenye yohlelo lokuya eYurophu
Uma ungenayo i-passport, ke engcono uthole ngokuhlaziya! Kuzothatha okungenani amaviki amane kuya kwayisithupha ukusuka esikhathini isicelo kuwe ukuthola omunye. (Kuye ngalokho izwe uhlala yebo) amasevisi okufinyeziwe ungasheshisa inqubo, kodwa ngeke ukhokhe. Kungcono unakekele lo kahle kusengaphambili ngaphambi kohambo lwakho. Usuvele unayo i-passport? Hlola isikhathi saso date! Amanye amazwe ongaphika Okufakiwe uma iphela ngaphakathi 6 ezinyangeni ezingu-uma ufika. veke!
Ithiphu 5: Ukuqasha imoto.
Efuna ukuqasha imoto lapho ohlela evakashele eYurophu? Qiniseka ukuthi zokushayela sika. Ezinye izinkampani eziqashisayo yemoto idinga abahambi ukuba ilayisensi umshayeli ngamazwe sika ngaphezu ilayisense yokushayela zabo ezweni labo lendabuko.
IStrasbourg kuya amathikithi ezitimela zaseParis
Ithiphu 6: Musa phezu-ukupakisha uhambo lwakho ezinezindawo eziningi kakhulu.
Njengoba kushiwo ngaphambili, kulula ukuzibophezela ngokweqile bese uzama ukungena kakhulu. Kuyaqondakala ngokuphelele. ikhefu lakho eziyigugu kufanele sisetjentiselwe kahle, ngakho-ke kulula ukuzama phezu-ukupakisha imininingwane yohambo lwabo yakho uma uhlela uhambo oluya eYurophu. Nokho, lokhu kungaba yizindleko ezinkulu (ingasaphathwa uyakhathaza), njengoba phezu-ukupakisha uhambo ezinezindawo eziningi kakhulu ezinsukwini ezimbalwa kakhulu kuholela isikhathi esengeziwe endleleni, negesi ngaphezulu noma athenge amathikithi esitimela ngemali. Ezimweni ezimbi kakhulu, kungaba enkulu yokuhlaselwa uhambo, ukuyivala ibe ukufiphala kwehhotela Ukungena nokungena nasemigwaqweni (nge emasakeni njalo futhi ukukhipha izimpahla), ngibukele neze-wavakashela landscape uhlanga esedlule amafasitela isitimela. Uma kwenzeka, yehlisa kancane ijubane. uzoba londoloza zokuhamba futhi sithole isikhathi esengeziwe ukuhlola izindawo zakho.
Amabruskss aya eRotterdam Isitiketi samathikithi
Amathikithi wesitimela e-Antwerp ukuya eRotterdam
Berlin to Rotterdam Isitimela amathikithi
Amathikithi eParis ukuya eRotterdam Isitimela
Ithiphu 7: imali Exchange
Abavakashi ukuchitha imali eningi ukuthenga euro kusukela ebhange yabo (noma okubi nakakhulu, kusuka exchange esiphikisayo) ngaphambi kokufika e-Europe. Lokhu kuphumela Imali eningi! ngakho-ke ungayinaki le ndaba uma uhlela uhambo oluya eYurophu.
iseluleko wethu amabombo manjalo i-ATM uma ufika e-Europe kanye ukuhoxisa ukheshi usebenzisa ikhadi lakho ATM. Kulula, futhi izinga lokushintshisana ukuthi uthola i-kuthengiselana pheze ngokuqinisekile ingcono kakhulu kunanoma iyiphi izinga siye ayithole ngisho ekhaya amabhange. Call ibhange lakho ngaphambi kokuthi uhambe ukubuza ATM kufakelwa ngamazwe, kanye ukubazisa ukuthi uzobe usebenzisa ikhadi lakho phesheya. Uma ungenalo ubatshele, kungahle kubazise ukuthi bacabange ukuthi ukukhwabanisa, futhi kuzovimba ikhadi lakho. Futhi, buza uma ibhange lakho izindawo ngamazwe noma ukubambisana wendawo amabhange eYurophu.
Amathikithi weFrankfurt kuya eCologne Sitima
Amathikithi eBrussels ukuya eCologne Sitiketi
Amathikithi eVienna kuya eCologne Isitimela
Stuttgart to Cologne Isitimela amathikithi
Ithiphu 8: Yini ulahlekelwa phezu kwesimo senhliziyo, wena ukunqoba phezu ezithuthelayo
Ungafaki indawo yakho yokonga encane ihhotela. Thina ukuncoma akunika bakhethe Airbnb yakho noma ehhotela nge indawo emaphakathi kakhulu uma uhlela evakashele eYurophu. Ibhajethi abahambi, ngokuqondene, bathambekele ukhethe ihhotela endaweni ezikude lokho € 5 ezishibhile eyodwa emaphakathi okwengeziwe. uzoba wonge isikhathi nemali yokuhamba (ikakhulukazi uma avale amatekisi ukuthatha).
I-Zurich kuya kumathikithi weSitimela weBasel
Amathikithi weBern kuya eBasel
Amathikithi eGeneva kuya eBasel Train
Ithiphu 9: Ungakhohlwa ukubiza umphathi wakho wefoni ngaphambi kokuhlela uhambo oluya eYurophu
Shayela inkampani yakho yenethiwekhi uma ephelele ukuhlela evakashele eYurophu futhi uthole i uhlelof ohlela ukusebenzisa ifoni yakho, bese uqiniseke ukumisa ifoni yakho ukugwema ngephutha amashaji edatha (kafushane: Ukucisha idatha yeselula futhi ukhawule inani izinhlelo zokusebenza zingase zisebenzise idatha yeselula). futhi, njengoba uhlelo, unamathele ukukhulula namanethiwekhi e-Wi-Fi ukulanda futhi ukuthumela ama-imeyili, ngibheka iWebhu, nokusebenzisa Ama-app. IYurophu inenye futhi abaningi WiFi ezidonsela, ngakho ngeke aphume okuthintana eside. Kungenjalo, ukuthenga ikhadi le-SIM efonini yakho uma ufika Europe.
Amathikithi eRimini ukuya eMilan Sitimela
I-Roma iya e-Florence Amathikithi wesitimela
Turin kuya eMilan Amathikithi wesitimela
Amathikithi eVenice ukuya eMilan Sitima
Ithiphu 10: Kukhona An App For Lokho
Ama-Eightydays wuhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuhamba olungakusiza uhlele uhambo oluya eYurophu ngenkathi unikeza abahambi ukubheka okulula kuzinketho ezitholakalayo uma ukuhamba kulo lonke elaseYurophu.
Abasebenzisi ukuqala ngokukhetha esinye idolobha ukuqala futhi uqede (okwamanje, kuyadingeka ukuze uqale futhi ukuqeda uhambo endaweni efanayo). Bese ukhetha idethi yokuhamba, esingakanani uhambo kuyoba futhi bangaki izindawo ukufaka. Abasebenzisi futhi ukhethe ukuthi uyafuna yini ukubheka amadolobha e-Europe, i-European Union, noma nje iSchengen Zone. Uhlelo lokusebenza ngeke ke ukudala i uhambo, ukuqedela ne-Airbnb amazinga edolobheni ngalinye, kulabo ngebhajethi.
Kungenzeka ukuqhubeka ongakhetha mmangalelwa kuze lokusebenza okhubekisa phezu uhambo ukuthi kubukeka kukuhle. Futhi ungakhathazeki mayelana travel esingesihle: Isayithi lisho ke ngokukhethekile ikhipha out zezindiza kude-kude nokuhamba ekuseni kakhulu okungakhipha abahambi emgwaqweni.
Nakuba akusiwona (okwamanje) uhlelo ephelele yokubhuka yonke uhambo European, Eightydays kungasiza ukunikeza abavakashi nomqondo kangcono intengo amaphuzu ekusukeni ezahlukene ngesikhathi engase ukubethula izindawo banganifundisi ngaphambilini kubhekwa.
Abahambi bangasebenzisa website Eightydays noma okusha okusanda kwethulwa lokusebenza le-iOS ukuhlela uhambo lwabo lwaseYurophu.
ILyon ukuya ezikhathini zaseLondon Isitimela
Amsterdam kuya e-Antwerp Isitimela izikhathi
IBrussels izikhathi zaseFrankfurt Isitimela
Am Brussels to Mainz Isitimela amathikithi
Kunjalo, indlela engcono kakhulu travel uhlale ngu zemininingwane! Londoloza zemininingwane kuyindlela engcono ukuze ukwazi ukuthenga amathikithi akho. Uma ubona ukuthi usenkingeni ukubhuka amathikithi akho isitimela uchofoze isixhumanisi https://www.saveatrain.com ukuthola izaphulelo ezinkulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / fr izilimi / noma / de nokuningi.
#uhlu lwamabhakede #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys amathiphu isitimela Izikhangibavakashi traveltips